Ukusekelwa Kwethu - Izisetshenziswa zeHaiber Play (iShanghai) Co, Ltd.
Ukutshala imali kanye nokubuya
Impumelelo yamakhasimende ibalulekile kithina, ngakho-ke sinikeza ikhasimende ngalinye ukuhlaziywa komuntu we-ROI ukunquma inzuzo yenzuzo yebhizinisi labo. Noma umusha emakethe, akudingeki ukuthi utshale imali ngokwakho. Esikhundleni salokho, sikusiza ukuthi uthathe izinqumo ezinolwazi ngokususelwa kumaqiniso nezibalo.
Uma unombono wokuqhelelanisa nezindawo zakho zokupaka izimbangi zakho, sizokusiza ukuthi usithuthukise saba yizixazululo zikakhonkolo, ezethulwe ngezindlela ezintsha njengabagibeli. Uma ungenayo imininingwane, ungakhathazeki, ungaxoxa ngokulindelwe nezinhloso zakho nababonisi bethu futhi sizobonana ndawonye.
Ngemuva kokuthi inqubo yokuqamba isiqalile, sizoba nokuxhumana okubanzi nekhasimende futhi umqambi wethu uzoqinisekisa ukuthi uyaziqonda kahle izidingo zakho ngokwemisebenzi yokusebenza nesitayela. Umkhakha wakho? Inhloso yebhizinisi izosebenza njengesiqondisi somklami ukuze akwazi ukuqala imidwebo yangokwezifiso ehlangabezana nezidingo zakho. Abaluleki bethu bazokuxhumana nawe ngamathuluzi ahlukahlukene wokuxhumana nge-Intanethi ukuze uqhubeke ngenqubekela phambili yakho. Ngemuva kokuphothula, uzozibonela mathupha ukwakhiwa. Sizozama konke okusemandleni ethu uze weneliseke ngokuphelele.
I-oda lakho ngalinye liphathwa njengento ehlukile. Ngemuva kokuqinisekiswa kokuhleleka, sizofaka imininingwane ohlelweni lwethu lokuphatha iphrojekthi, ukuze sihlele ukukhiqizwa ngokuya ngezinsuku okuvunyelwene ngazo zokulethwa kulungile. Umphathi wephrojekthi yakho oqokiwe uzokutshela njalo ukuze ulungele kahle lapho kuqala iphrojekthi.
EMVA KOKUSEKELA USEKELA
Ukuthola imvume ngokwezifiso
Imithetho nemigomo yangokwezifiso iyahlukahluka kuye ngezwe, kepha okuhlangenwe nakho kwethu okubanzi kokuthumela indawo yokudlala kanye nemishini yokudlala emazweni angama-20 kusivumela ukuba sisingathe ngempumelelo izindaba zokuhambisa kanye nokwenza ngokwezifiso. Izici eziningi zebhizinisi lakho lokudlala zasendlini zidinga ukunakwa kwakho, kodwa qiniseka ukuthi ukuthunyelwa komkhiqizo akuyona enye yazo.
Ukufakwa okufanele kubalulekile njengengxenye yezangaphakathi njengekhwalithi. Ukuphepha nokuhlala njalo kwezinkundla zokudlala eziningi kuthathelwa phansi ukufakwa okungafanele, i-Haiber play inethimba lokufaka eliqeqeshiwe futhi eliqeqeshiwe elinolwazi olunzulu lokufaka endaweni yokudlala engaphakathi kuka-500 emhlabeni jikelele. Ungaqiniseka ukuthi ungaphathisa ukufakwa kwesayithi lakho kithi.
Singanikeza ukuqeqeshwa kwamahhala kusayithi lakho kubasebenzi bakho, okufaka ukufakwa, ukugcinwa nokulawulwa kwepaki. Baphinde baphendule nemibuzo engahle ibe khona engaqhamuka lapho kusetshenzelwa insiza.
Inkonzo yokuthengisa ngemuva
Silwela ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu ngemuva kokuthengisa ukuze ujabulele idumela elingcono kanye nesikhathi sokulungisa esifushane. Wonke amakhasimende ethu anokufinyelela kuzilungiselelo ezenziwe ngokwezifiso nokufakwa okuphelele nezincwadi zokulungisa okubandakanya izingxenye ezisele ukuze ipaki isebenze kahle. Ngaphezu kwalokho, umphathi wethu we-akhawunti oqeqeshiwe nethimba lokusekelwa lizokunikeza usizo olufika ngesikhathi kuwe izinsuku eziyisikhombisa ngesonto.